Google sy AMEX mamokatra horonantsary maimaim-poana ho an'ny orinasa madinidinika | Martech Zone
Alahady 2 Janoary 2011 Alahady Oktobra 4, 2015 Douglas Karr
Manana orinasa kely? Ny fikarohana nataon'i Google dia mampiseho fa ny horonantsary an-tserasera dia afaka mampiroborobo ny varotra in-store hatramin'ny 6%, ary mampitombo ny fahatsiarovan-marika hatramin'ny 50%. Google sy American Express dia miara-miasa ary mamokatra horonantsary ho an'ireo orinasa madinidinika hampiroborobo ny orinasany kely amin'ny alàlan'ny fampiasana video.
Ny tantaram-pandraharahako dia fitaovana maimaimpoana ho an'ny orinasa kely avy amin'ny Google sy American Express. Manome torolàlana iray isaky ny dingana ho an'ny tompona orinasa kely ity fitaovana ity mba hamoronana horonantsary manana kalitao matihanina momba ny orinasany. Ireo horonantsary noforonina niaraka tamin'ny fitaovana fanovana My Business Story dia hitehirizana amin'ny kaonty Youtube an'ny tompona orinasa kely ary azon'ireo orinasa ampiasaina ho marketing na fananana dokam-barotra amin'ny ho avy.
Ny tsara indrindra dia maimaim-poana ireo horonantsary ary nahasarika olona iray. Ny ankamaroan'ireo horonantsary hitako tamin'ny serivisy dia nisy fijerena 20,000 500,000 ka hatramin'ny XNUMX. Ireo horonan-tsary dia an-tsarintany ary sokajina ao Ny tantaran'ny Business Business's ahy ary misy fizarana manokana manampy orinasa kely miaraka amin'ny marketing an-tserasera.
Tags: American Expressamexhoronan-tsary googleGoogle +fandraharahana madinikavideo marketingYouTube Video